eNasha.com - संसारकै महङ्गा वेबसाइट डोमेन नामहरु
संसारकै महङ्गा वेबसाइट डोमेन नामहरु
इन्टरनेटमा हिजोआज सबथोक बिक्री हुन्छ । सबथोक । त्यसो भए वेबसाइट पनि बिक्री भएको तपाइँलाई थाहै होला । वेबसाइट मात्र किन, डोमेन नाम अर्थात् वेबसाइटको नाम मात्र किन्न पाए, यहाँका अरबपतिहरु सेकेण्डको समय पनि नगुमाई पैसा हाल्न तयार हुन्छन् । त्यो पैसा पनि चानचुनको होइन, लाखौँ डलरको !
तपाइँलाई एउटा उदाहरण दिऊँ- हालै एउटा वेबसाइटको नामको लडाइँ चल्दा त्यसको मूल्य तोकिएको थियो तीन लाख डलर । सिनियर्सडटकम नामक यस डोमेन नामको जब बोली बढ्दै गयो र अन्त्यमा कार्यक्रम सकिएको घोषणा गरियो, यसको मूल्य १८ लाख पुगिसकेको थियो । यति आकर्षण छ, डोमेन नामको !
फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार हालै न्यूयोर्कको ग्राण्ड हयात होटलमा आयोजना गरिएको वेब डोमेन नामको डाक बढाबढमा २१८ वटा यस्ता नामले भाग लिइरहेका थिए, जसको खोजी हरेक व्यक्तिले गरिरहेको थियो ।
प्रदर्शनीमा रहेका धेरै नामहरु दुइ हजारदेखि तीन हजार पाँच सय डलरका सामान्य दामवाला डोमेन नामसहित अन्य पनि प्रदर्शनीमा थिए । प्रदर्शनीमा महंगा अन्यमध्ये क्रेडिटचेकडटकम चाहिँ १० लाख डलरदेखि ३० लाख डलर मूल्यमा आएर अड्किएको थियो, तर त्यो चाहिँ तत्काल बिक्री भएन ।
अनलाइन व्यवसायमा बढ्दो आकर्षा र उपयुक्त नामको घट्दो अवसरका कारण युआरएल (युनिफम रिसोर्स लोकेटर) को बेचविखन हिजोआज तीव्र रुपमा हुन थालेको छ । "यसले डोमेन नामको महत्वलाई देखाइरहेको छ", वेब ठेगानाका दलाल म्याट बेन्टलेले बताए ।
सेक्सडटकमले त सन् २००५ मा १ करोड २० लाख डलरमा बिक्री भएर इतिहास रच्यो । त्यस्तै पोर्नडटकममा ९५ लाख डलरको बोली लगाइएको एक महिना पनि बितेको छैन । त्यसतै बिजनेसडटकम, डायमन्डडटकम र बियरडटकमको मूल्य पनि तपाइँलाई आश्चर्यमा पार्ने किसिमको छ ।
प्रविधिको महत्व बढ्दै जाँदा विभिन्न कम्पनीले आफ्नो व्यापारिक ब्राण्ड स्थापना गर्न वेबसाइटको नाम पनि उस्तै आकर्षक हुनुपर्ने महसूस गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबैले खोज्ने, रोज्ने, चाँडै सम्झने किसिमको नामको मूल्य नै बेग्लै ! त्यही भएर मानिसहरुले सबैभन्दा बढी खोज्ने नामको वेब नाम किन्न पैसावालहरु तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
अहिले इन्टरनेटमा विज्ञापन दिनुपर्ने रेट हरेक वर्ष ३० प्रतिशतले बढ्न थालेपछि ठूल्ठूला विज्ञापकहरुले सबैले सजिलै भेट्न सक्ने वेबसाइटको नाम छान्न बाध्य छन् । उनीहरु यस्तो नामको खोजमा हुने गर्दछन्, जुन खोजी गर्न सजिलो शब्द पनि होस् र त्यो नाम साधारण भइकन पनि धेरै कुरा भन्न सक्ने विवरणात्मक होस् ।
जस्तो एउटा साधारण उदाहरण- तपाइँले आफूसँग सम्बद्ध नभएको कुनै नाम छान्नु भयो, पेपरकप्सडटकम । तपाइँलाई कागजी मग बेच्नु छैन तर यो नाम यति विवरणात्मक छ कि गुगल, याहु वा एमएसएन खोजीमा गएर टाइप गर्ने बित्तिकै शुरुमै तपाइँको नाम आउन सक्छ ।
अहिले त डोमेन नाम दर्ता एउटा ठूलो व्यवसाय बनिसकेको छ । कतिसम्म भने एक जनाले एकै पटकमा अढाइ सयदेखि पाँच सयसम्म यस्ता नाम 'रिजर्भ' गर्छन् । कतिले त धेरै चल्तीका वेबसाइटको समय सकिने बित्तिकै सुटुक्कै आफू रजिष्टर गरेर बीचमा दलाली गरेर लाखौँ रुपियाँ हड्पिने पनि गर्दछन् ।
आउनुहोस्, संसारकै सबैभन्दा महङ्गो दाममा बिक्री भएका वेबसाइट डोमेन नामहरुबारे सानो जानकारी लिऊँ-
१. नम्बर एकमा पर्न सफल साइटको नाम हो- सेक्सडटकम । यसको मूल्य एक करोड २० लाख डलर पर्‍यो । मूलतः गेरी क्रेम्यानले यो नामलाई सन् १९९४ मा दर्ता गरेका थिए । सिलिकन भ्यालीमा काम गर्ने सफ्टवेयर सेल्सम्यान यी व्यक्तिले सने २००५ मा निजी छलफलका माध्यमले एस्कम एलएलसी नामक बहुचर्चित कम्पनीलाई उनले बेचेका थिए । धेरै वर्षअर्काको सफ्टवेयर बेच्दाबेच्दा गर्न नसकेको काम एउटा डोमेन नामले करिब १० वर्षछि उनको आर्थिक जीवन नै परिवर्तन गरिदियो ।
२. गएको मे महिनामा एमएक्सएन लिमिटेडले यो पोर्नडटकम नाम खरीद गरेको थियो । मोनिकरडटकमले यो नामका लागि ९५ लाख डलर बोली लगाएको थियो र एमएक्सएनले यो रकम पूरै नगदमा तिरेको थियो । नगदी तिरिएको सबैभन्दा धेरै रकम भएको यही एउटा मात्र वेब नाम अहिलेसम्म रहन गएको छ ।
३. तेस्रो नम्बरमा रहन सफल बिजनेसडटकमलाई ७५ लाख अमेरिकी डलरमा बेचिएको छ । डिज्नेका पर्ूव कार्यकारी निर्देशक ज्याक वेनबमले सन् १९९९ मा स्थापना गरेको इकम्पनिज् भेन्चर ग्रुपले यो नाम आफूमा सुरक्षित राखेको थियो । यसको डिमान्ड निकै उच्च भए पनि यसको पर्ूण्ातः उपयोग हुन सकेको छैन ।
४. ओडिमो नामक संस्थाले एउटा खुद्रे गहना पसल चलाउनेलाई मे २००६ मा डायमण्डडटकम वेबसाइट बेच्दा ७५ लाख डलर कमायो । आइसडटकमले खुद नगद तिरेर यसलाई आफ्नो बनाइसक्दा उसले थप २० लाख रुपियाँ खर्चिनु परेको थियो ।
५. बियरडटकम सबैभन्दा महङ्गा वेब ठेगानामा पाँचौँमा पर्दछ । मूलतः बिल फिशर नामक व्यक्तिले यो नाम दर्ता गराएका थिए । उनी एउटा वेबसाइट निर्माता पनि थिए । जोसँग बडवेजर र गिनिजडटकम आफूसँग सुरक्षित राखेका थिए । उनले यो साइटलाई बेल्जियमको एउटा बियर कम्पनीलाई बेचिदिए । यो कम्पनी संसारकै सबैभन्दा धेरै बियर बनाउने कम्पनीमध्ये पर्दछ । अहिले यो वेबसाइट पुरुष व्यक्तिहरुलाई ध्यानमा राखी बनाइएको छ ।
प्रविधि माया बलिउड सेलेब्रिटी सुन्दरी गुगल भव्यता मूर्ख्याइँ विज्ञापन मुद्दा मामिला इन्टरनेट नग्नता उपाय परिस्थिति फट्याइँ कीर्तिमान हलिउड उदेकलाग्दो श्रीमानश्रीमती सेक्स